Hay'ado Kaalo oo tababar looga hadlayo ka hortagga tacadiyadda ku qabatay Magaalada Boosaaso. - Horseed Media • Somali News
Hay’ado Kaalo oo tababar looga hadlayo ka hortagga tacadiyadda ku qabatay Magaalada Boosaaso.
Hay’ada Kaalo ayaa Magaalada Boosaaso ka furtay kulan wacyogelin ah oo ku saabsan ka hortaga tacadiyada ku salaysan jinsiga ( SGBV ), kaasi oo ujedadiisu tahay in la baro ka qaybagalayaasha , waxayna baran donan ka faaidaystayaashu qaababka loo sameeyo la talinta dhibanayaasha.
54 Qof oo isugu jirra haween, qaxooti, Nabadoono iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka faaidaystay, waxaana maal-gelinayay Hay’ada UNHCR, Furitankii kulanka waxaa ka hadlay Madaxa wakiilka Hay’ada KAALO Boosaaso Mudane Cabdicasiis Siciid Maxamed wuxuuna ku Booriyey ka qayb-galayaasha in ay ka Faaidaystaan Wacyigelinta ayna qataan dorkooda ku aadan ka hortaga Tacadiyada.
Waxaa si rasmi ah u furay kulanka ]wakiilka Wasaarada Haweenka ee Gobolka Bari Shamis Bulxan waxayna u mahad-celisey Hay’ada Kaalo waxay sheegtay in kulkaan uu ahmiyad gaar u leeyahay, xilligana ay lagama maarmaan tahay in la oggaado ahmiyada ay leedaha ka hortaga tacadiyadda jinsigga.
Dhankiisa Nabadoon Warsame Aadan Salax ayaa Hay’ada Kaalo ku booriyay shaqada wanaagsan ee ay u hayso dadka qaxootiga iyo barakacayaasha ah, dhaka kale waxa uu ku baaqay in lagu dadaalo sidii loo joojin lahaa tacadiyadda ka dhanka ah Jinsigga.